Nintendo sy LEGO Team Up hamorona Super LEGO Mario | Famoronana an-tserasera
Matotra izany raha mieritreritra isika fa ny Nintendo's Mario dia nihalehibe tao anaty "pixelated" intern, ny hevitra fametrahana azy miaraka amin'ny kiran'ny LEGO dia mihoatra ny hevitra mahafinaritra fotsiny. Ary izany indrindra no zava-nitranga, Nintendo sy LEGO dia miara-miasa amin'ny Super LEGO Mario.
Fiaraha-miasa hamoronana vokatra vaovao ary azo antoka fa hanome tombony roa lehibe ireo. Tsy ho an'ny kilalao ihany fa ho an'ny zavatra rehetra mety hitranga, Sarimihetsika Super LEGO Mario? Lalao video?
Mandritra ny fotoana ijanonanay manoloana ny tranoben'ny LEGO Mario ary izany dia mampifangaro am-pahavitrihana ireo sakana fananganana LEGO miaraka amin'ireo nomerika sy teknolojia an'ny orinasa Japoney.
Raha ny marina, ny sarin'i Mario misy vinyl amin'ny tarehiny sy ny vatany, ary afaka mifanerasera amin'ireo sakana ianao hanangonana vola madinika ary handroso amin'ny ambaratonga. Ny fisongadinana iray hafa amin'ity sanganasa fananganana ity dia ny fisehoan'ny tarehin'i Mario ary miova izy ireo rehefa apetratsika anaty afo i Mario.
Iray amin'ireo tanjon'ity trano ity ny ento ny votoatin'ny Super Mario Maker, ny lalao video ahafahanao mamorona ny haavonao manokana. Ka miresaka momba ny fitondrana tanteraka an'i Mario amin'ny tontolon'ny vatana isika, ary iza no tsy ho entin'ny majia an'i Nintendo sy ny toetrany miaraka amin'ity sanganasa fananganana ity?
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra daholo ny pitsopitsony feno sy ny vidin'ny setroka, noho izany dia mila miandry kely isika vao handray an-tanana an'ity Ny traikefa nahafinaritra an'i Mario nalaina tamin'ny zavatra ara-batana rehetra ary sakana fananganana LEGO. Fandraisana andraikitra lehibe toy ny hafa efa nanananao tato anatin'ny taona vitsivitsy ny orinasan-kilalao danoà.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Azonao an-tsaina ve i Mario ho LEGO? Toy ny tena izy: ekipa Nintendo sy LEGO hiatrika izany
Tranombakoka 10 izay azonao tsidihina avy any an-trano ny fanangonana an-tserasera azy ireo amin'izao andron'ny quarantine izao